အီးမေးလ်ပို့ရန် & Messaging ကို Key ကို Concepts
Up ကိုချိုးဖို့, Instant Messaging အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ထုတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအွန်လိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုအတူတက်ဖဲ့တာဝန်မဲ့ခဲ့တာထိုးစစ်နှင့်သူရဲဘောကြောင်လမ်းထွက်ကြောင်းညွှန်ပြပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုအချို့သောအရှေ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲကွာရှင်းနိုင်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းမှာရှိတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးမကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှကိုယျ့ကိုယျကိုလွတ်မြောက်ဖို့ဒီစွမ်းရည်ကိုချမှတ်မပေးသင့်သလဲ
ကျနော်တို့ကနေကိုယျ့ကိုယျကို detach ဖို့မထင်နိုင်ပါတယ် Web-enabled devices များရဲ့ပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ရန်တခါတရံတခုချက်ချင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်စာသားမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာ-to-မျက်နှာစကားပြောဆိုမှုပိုမိုနှစ်သက်နေစဉ်သငျ့ဆကျဆံရေးကိုအောက်ပါစံမဆိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုလေးခုနှင့်တွေ့ဆုံလျှင်, သင်လုံးဝတစ်စုံတစ်ဦးကိုအတူတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ Web ကိုသုံးပြီးစဉ်းစားပါနဲ့ဆိုချောင်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်တက်ချည်နှောင်နိုင်သည်
အဆိုပါဆက်ဆံရေးက Short-Term ခဲ့
ဒါကဖြစ်ကောင်းဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ရန်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့သို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းနတ်ကတော်ကို အသုံးပြု. ကိုထောကျပံ့ဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးမှုကိုများအတွက်အလားအလာသင့်ရဲ့ကြမ်းတမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်ကောင်းသောဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အွန်လိုင်းတက်ခြိုးဖောကျသာအန္တရာယ်ကနေသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး, ကပင်သင်၏အသက်ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါဆက်ဆံရေး Long ကအဝေးသင်ဖြစ်ပါသည်
ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကြားဆက်ဆံရေးကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, တခါတရံတွင်သူကအထဲကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ သင်ဤပိုးပန်းပေးရန်အင်တာနက်အသုံးပြုမယ်လို့သကဲ့သို့သင်သည်လည်းသူကတူညီသောလမ်းကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးအခမဲ့ချက်တင်ခန်းထဲမှာတစ်ခုသို့မဟုတ်လူမှုရေး app ကိုအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းရှိမရှိ, သင်လုံးဝတူညီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော web-based ဆက်သွယ်ရေး tool ကိုသုံးပြီးဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအထက်ပါသတ်မှတ်ချက်မကိုက်ညီသည့်အတွက်တချို့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နည်းလမ်းတွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမှထိုကဲ့သို့သော tool ကိုသုံးပြီးအဘို့အကောင်းတစ်ဦးသမ္မတလောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, (သို့သော်ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်) သူသို့မဟုတ်သူမ cheats လျှင်သင်, ဥပမာ, သင့်မကြာမီ-to-ဖြစ်-ဟောင်းကိုတွေ့မြင်ရန်ဆန္ဒရှိမထားတဲ့အတွက်အထိခိုက်မခံအခြေအနေများကို။
တစ်စုံတစ်ဦးကအွန်လိုင်းနှင့်အတူ Up ကိုချိုးဖို့ကိုဘယ်လို
Instant Messaging / စာသား Messaging ကို
သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကြောင်းကိုရိုးရှိကြလော့။ သငျသညျမဟုတ်ရင်လူတစ်ဦးအတွက်အခွအေနေ sugarcoat မယ်နေစဉ်, သငျသညျအသီးအသီးအခြားအကိုမြင်လျှင်ကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အလိုဆန္ဒဖော်ပြအတွက်အကျဉ်းဖြစ်သင့်သည်။
အနာဂတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်အပိုဆောင်းမျှော်မှန်းချက်ကိုဖျောပွဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်တစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်ခံရဖို့ဆန္ဒရှိပါလျှင်, ထိုသူတို့ကိုသင်တို့သိရကြကုန်အံ့။
တစ်တားမြစ်မိန့်လိုအပ်ပါကအမှု၌, Chat history ကိုများနှင့်အခြား features တွေကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်းတည်းရာကိုမဆိုခြိမ်းခြောက်မက်ဆေ့ခ်ျများသိမ်းဆည်းပါ။
သငျသညျဆက်ဆံရေးနှင့်အနာဂတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်မျှော်လင့်ချက်များအဆုံးသတ်ချင်သောအပြည့်အဝဖော်ပြ။ ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့သင်တစ်ဦးလူနေမှုအာကာသသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမျှဝေလျှင်မည်သည့်ဥစ္စာ, ထုတ်ယူပါလိမ့်မည်လည်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။
သင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးမျက်နှာ-to-မျက်နှာစကားပြောဆိုမှုပေးသင့်ပေမယ့်လူတစ်ဦးအတွက်လုပ်နေတာတွေနဲ့အဆင်ပြေမခံစားရဘူးဟုခံစားရလျှင်, webcam ချက်တင်အလားအလာ option ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။
သင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်၏နေ့စွဲသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်မြင်သောအခါ, သင်ခံစားရနှင့်သင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ဘူးလျှင်ထိုကဲ့သို့သောချစ်ကြည်ရေးအဖြစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်လုပ်သို့မဟုတ်ထွက်ဆွဲထားကြဘူးဘယ်လိုရိုးသားဖို့သတိရတစ်ချိုးတက်၏ထိုးနှက်ဖြေလျှော့ဖို့ဖိအားပေးခံရခံစားရလိမ့်မယ်နေစဉ် တစ်ခုခုကို။
သငျသညျဥပဒေရေးရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်စကားပြောဆိုမှုများ၏စံချိန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှာလျှင်၎င်းတို့၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲအခြားသူတစ်ဦး၏မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်နှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဒေသဆိုင်ရာနှင့်ပြည်နယ်ဥပဒေများကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်တို့နှင့်အတူအတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှာကြံနေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့ကအမှတ်တမဲ့ပြတ်တောက်ဘို့ပြင်ဆင်နှင့် re-ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်း tool ကိုသုံးပြီးဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့်စကားပြောဆိုမှုဆက်လက်လိမ့်မည်။
အွန်လိုင်း Up ကို Breaking အကြောင်းတစ်ဦးကသတိပေး
သငျ့ဆကျဆံရေးအင်တာနက်ပေါ်ရှိဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ရန်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မယ်နေစဉ်, အချို့သောအခြားလူများဤ action အဖြစ်သင့်လျော်သောမမြင်ရအံ့သောငှါသတိပြုပါ။ ဤသည်အချို့သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့လူအကြားတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကလူကိုသင်ရိပ်မိပုံကိုမှအထိခိုက်မခံလျှင်, ထခွဲထွက်ဖို့ထားတဲ့ IM, အီးမေးလ်, စာသားသို့မဟုတ် VoIP အသုံးမပြုမီနှစ်ကြိမ်ထင်ပါတယ်။
ကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်တော့မှမ တွစ်တာ ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ရန် Facebook ကအမှတ်တရပို့စ်များ, အများပြည်သူချက်တင်ခန်းသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုချက်ချင်းမက်ဆေ့ခ်ျ။ ဆက်သွယ်ရေးသင်နှင့်သင့်နေ့စွဲသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်များအကြားပုဂ္ဂလိကကျောင်းဖြစ်သင့်သည်။
ဂျီမေးလ် SMTP က Settings မေးလ်ပေးပို့ခြင်းများအတွက်
အီးမေးလ်နှင့်အတူ POP ကိုအမှားနားလည်ခြင်း
AOL Mail ကို SMTP က Settings များအတွက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Make အခမဲ့ Voice သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကို Google Hangouts ကိုအတူတောင်းဆို
Mac အတွက် Yahoo က Chat ကို
MyRealBox: အ (ဟောင်း) အခမဲ့အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အီးမေးလ်များအတွက်သင့်လျော် Yahoo က SMTP က Settings ကိုလေ့လာပါ
Omegle တည်ထောင်သူ, Leif K-Brooks အတူအင်တာဗျူး
လျင်မြန်စွာတစ်ဦးဝက်ဘ်ဆိုက် Set Up လုပ်နည်း
အလိုအလျောက် Yahoo ကဖျက်ခြင်းပြီးနောက် Next ကိုကို Message ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
မြူအလင်းများသို့မဟုတ် Lamps: သူတို့ကိုလိုအပ်တာလဲဘယ်သူနည်း
Android ပေါ်မှာအကောင်းဆုံး Interactive မှထူးအိမ်သင်အားကစားပြိုင်ပွဲ
Windows တွင် File ကိုအသင်းကိုပြောင်းလဲနည်း
Mac ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက် DVD ကိုမှ Roxio Easy ကို VHS
ထောင့်ကွက် vs အမေဇုံ S3 ကို vs Apple က iCloud vs Google Drive ကို
ချိန်းတွေ့သော်လည်း, RCA ဂျက်ကိုသင်စဉ်းစားပါကိုသန်းပိုအဖြစ်များသည့် Are
Vivaldi Browser ကို: တွမ်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ် Pick
Google က Chrome မှာ Extensions များနှင့် plug-ins ကို Disable လုပ်နည်း
Windows Live, Hotmail - အခမဲ့အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု
အိုင်ပက်အပေါ် Dropbox ကို Set Up လုပ်နည်း
အဘယ်မှာရှိသင့်အသုံးပြုထားတဲ့ iPhone, iPod ကိုရောင်းဖို့
7 အရေးကြီး Webcam အင်္ဂါရပ်များ
အဆိုပါ HR (Horizontal နည်းဥပဒေ) Tag ကို Styling
ဘဝကမှသင့်ရဲ့ Facebook ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုယူခဲ့
ဂရပ်ဖစ်ဖိုင်မှတ်တမ်း Format ကိုအမျိုးအစားများနှင့်တဲ့အခါမှာတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုမှာအသုံးပြုနည်း
ပျော်စရာ Instagram ကို hashtag
Windows Vista ကအတွက် ABO Menu ကို မှစ. အော်တို Restart Disable